Ahoana ny fampiasana VPN amin'ny telefaona finday? | Androidsis
Miguel Gaton | 27/07/2021 10:40 | Nohavaozina amin'ny 27/08/2021 10:57 | fiarovana
Ny fitazonana ny fifandraisana hatrany amin'ny fotoana ilaina dia ilaina ankehitriny sy ampahany amin'ny fanazaran-tena isan'andro an'ny mpampiasa maro izay miditra amin'ny Internet hanatanterahana ny fifanakalozana ara-barotra, hizara vaovao ary hankafy ny habaky ny tambajotra sosialy; fa fantatrao ny fomba fampiasana VPN amin'ny telefaona finday? Ilaina izany mba hiantohana ny fiarovana ny angon-drakitrao manokana, fantaro.
Eto izahay dia milaza aminao hoe momba ny inona ilay tamba-jotra tsy miankina ary aiza no azonao atao misintona VPN mendri-pitokisana.
1 Inona no atao hoe fifandraisana VPN ary inona no ilana azy?
2 Ahoana no fampiasanao VPN amin'ny findainao?
Inona no atao hoe fifandraisana VPN ary inona no ilana azy?
Rehefa miditra amin'ny Internet daholo ianao ny hetsika nataonao dia voasoratra amin'ny alalàn'ny IP misy anao, mamela anao hizara rakitra, hanatanteraka karazana fomba rehetra na hifampiresaka tsotra fotsiny. Ny VPN dia teknolojia tambajotra izay mikendry ny hanafina ny angon-drakitrao manokana eo am-pitetezana ny tranonkala, ka hialana amin'ny fidirana amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny olona tsy nahazo alalana.
Nafenina sy azo ampiharina ny IP-nao tsy mamela dian-tongotra ianao izay manondro izay nataonao tao amin'ny Internet. Miaraka amin'izany, ny mpampiasa alalana rehetra dia afaka mampifandray sy mifanakalo tahiry soa aman-tsara, amin'ny alàlan'ny fantsona nomerika manokana izay anaovany izany mila manana solonanarana sy teny miafina fotsiny ianao.
Ahoana no fampiasanao VPN amin'ny findainao?
Ny VPN dia fitaovana fiarovana azonao ampiasaina hatsarao ny zavatra niainanao, ka manitatra ny fifandraisana misy eo an-toerana na dia tsy mifandray ara-batana aza ireo mpampiasa, toy ny nampiasaina teo aloha.
Raha tsorina, ny fifamoivoizana amin'ny tamba-jotra dia mbola Toro lalana avy amin'ny fitaovanao ISP na mpamatsy Internet anao amin'ny alàlan'ny VPN novidinao, toy ilay atolotry ny Surfshark; Midika izany fa hanana adiresy IP hafa ianao sy ny serivisy rehetra omen'ity mpizara ity.
Amin'ny alàlan'ny fampiasana VPN amin'ny findainao dia azonao atao izany mampiasa làlana fidirana ho an'ny firenena rehetra ary mankafiza atiny mety tsy ho azonao. Ohatra iray amin'izany no porofon'ireo mpampiasa mampiasa fifandraisana VPN any Shina mankany sorohy ny sakana matetika eo amin'ny sehatra eropeana.
Raha hampiasa VPN miaraka amin'ny rafitra Android misy amin'ny finday maro dia tsy ilaina ny miditra ao amin'ilay faritra manondro Tambajotra sy Internet, safidio ny fanaingoana VPN ary ampidiro ny angon-drakitra rehetra angatahiny, toy ny:
Anarana na famantarana manokana
Username izay hampiasainao hidirana amin'ny serivisy
Raha te hifandray amin'ity profil ity ianao dia tsy maintsy manindry azy ianao ary ho voasoratra ho anisan'ny toe-javatra tianao indrindra, raha tsy izany dia hitohy ilay fifandraisanao izay ampiasainao matetika.
Soa ihany ity VPN dia manana fampiharana azy manokana ary tsy hanana olana amin'ny fidirana amin'ny mombamomba anao ianao, mila mampidina azy io fotsiny ianao ary manomboka mankafy ny serivisiny, miaro avy hatrany ny fiainanao dizitaly. Ny teny filamatr'izy ireo dia: omeo fidirana manokana amin'ny Internet misokatra, mba tsy hametraka loza mety hitranga amin'ny mombamomba anao.
Tadidio fa ny finday, toy ny fitaovana elektronika hafa toa ny takelaka, solosaina na iPods Mora iharan'ny fanafihana ataon'ireo mpanao heloka bevava an-tserasera izay mailo hatrany izy ireo, mitady izay marefo amin'ny fiarovana.
Miaraka amin'ny VPN tsara hosakananao ny fanafihany ary hanafina ny IP-nao mba hahafahanao mandefa na mandray vaovao amin'ny endrika takelaka, tsy misy fidirana ho an'izay tsy nahazo alalana taminy.
Tsy misy intsony ny dokam-barotra manahirana, ny malware, ny phishing, na ny halatra maha-izy azyMiaraka amin'ity fitaovam-piarovana mahery vaika ity dia afaka mankafy serivisy amin'ny Internet malalaka ianao ary miditra amin'ny pejin-tranonkala samihafa nefa tsy misy sakana na famerana mahasosotra.
Tsy mitsahatra ny manao heloka bevava amin'ny cyber mitady fitaovana mora tohinaSatria izy ireo no voalohany ao amin'ny lisitrao iharan'ny asan-dahalo anao, sakano izy ireo amin'ny alàlan'ny Surfshark VPN.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Ahoana ny fampiasana VPN amin'ny telefaona finday?